दुर्घटनास्थल बाटै हरायो मृ’तकको साथमा रहेको सुन र पैसा ! समाचार
दुर्घटनास्थल बाटै हरायो मृ’तकको साथमा रहेको सुन र पैसा !
गत बुधबार इलामको रोङ गाउँपालिका–४, पहिरोमा पिकअप दु’र्घटनाका मृ’तकको साथमा रहेको पैसा र सुन हराएको छ । दु’र्घटनामा मृ’त्यु हुने मेचीनगर नगरपालिका–४ का ५५ वर्षीय रमेश थापा र ४० वर्षीय सूर्यबहादुर थापाको साथबाट करिब ४ लाख रुपैयाँ पैसा र आधा तोलाको सुनको औँठी दु’र्घटनास्थलबाटै लु’टिएको परिवारको दा’बी छ ।
थापा दाजुभाई इलामबाट खसीबाख्रा खरीद गरी झापामा ल्याएर बिक्री गर्दथे । दु’र्घटना भएको दिन पनि खसी खरीदका लागि पिकअप लिएर इलाम तर्फ जाँदै गरेको मृतकका भाई मनोजकुमार थापाले जानकारी दिए ।“दाईहरु विहान ४ बजे नै घरबाट खसी किन्न इलाम जानु भएको थियो ।
हामीलाई ५ः५५मा स्थानीयले दु’र्घटना भएको खबर गरे” थापाले भने, “हामी घ’टनास्थलमा पुग्दा स्थानीय र प्रहरी आइसकेका थिए । दाजुको साथमा रहेको करिब चार लाख पैसा र औँठी भने घ’टनास्थलबाटै गायव भयो ।”पैसा ह’राएको विषयमा प्रहरी र जनप्रतिनिधिलाई जानकारी
गराएको मृ’तकका छिमेकी अर्जुन कार्की बताउँछन् । “मैले प्रहरी र जनप्रतिनिधिलाई पैसा र सुन ह’राएको जानकारी गराउँदा उहाँहरुले यहाँ पेशवर मान्छेहरु हुन्छन् भन्ने जवाफ दिनुभयो” कार्कीले भने, “प्रहरीले अ’पराधिको अनुसन्धान गरी तत्काल का’नुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छ ।”
पैसा र सुन हरा’एको सूचना आफूलाई नआएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलामका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) गंगाबहादुर थापाले बताए । पिकअप चालक ३३ वर्षीय अर्जुन कोइराला घा’इते छन् । उनको बिर्तामोडको विएण्डसी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
२०७८ माघ १७, सोमबार प्रकाशित0Minutes 122 Views